China Deep Groove Ball Ukunikela Ukwenziwa kunye Factory | Ilanga
Izinto ezikhoyo: Ukunikela Steel / carbon intsimbi
Iimpawu ezikhoyo: Jinmi / Harbin
Uluhlu lwemodeli ekhoyo: imodeli eqhelekileyo
Ubungakanani besicelo: Oomatshini bokwakha, oomatshini bobunjineli, izikeyiti ezijikelezayo, yo yo, njl
Unokubonelela ngezinye iinkonzo: i-OEM, njl
Iibheringi enzonzobila emseleni ibhola zezona ziqhelekileyo zixhaphakileyo iibheringi.
Isiseko sebhola ye-groove esisiseko esine-ring yangaphandle, isangqa sangaphakathi, iseti yeebhola zentsimbi kunye neseti yeekheji. Kukho iindidi ezimbini zebheringi ezinzulu zebhola, umqolo omnye kunye nomqolo ophindwe kabini. Ubume bebhola yomjelo obanzi yahlulwe yaziindidi ezimbini: itywiniwe kwaye ivulekile. Uhlobo oluvulekileyo luthetha ukuba ukuthwala akunasakhiwo sitywiniweyo. Ibhola ye-groove enzulu etywiniweyo yahlulwe yangqina-uthuli kunye nobungqina beoyile. uphawu. Izinto zokugquma ubungqina bokuba luthuli zigxunyekwe ngeplani yesinyithi, esebenza kuphela ukuthintela uthuli ekungeneni kugqatso lomdyarho. Uhlobo lobungqina beoyile litywina leoyile ekunxibelelana nalo, elinokuthintela ngokufanelekileyo igrisi ekuthwaleni kungaphuphumi.
Umqolo owodwa webhola ye-groove enekhowudi yohlobo lwekhowudi yohlobo lwe-6, kunye nomqolo ophindwe kabini webhola ye-groove enekhowudi yohlobo lwe-4. Isakhiwo sayo esilula kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo kuyenza ibe lolona hlobo luqhelekileyo luveliswayo nolusetyenziswa ngokubanzi.
Iibheringi zebhola ye-groove ebanzulu ikakhulu ithwala umthwalo we-radial, kodwa inokuthwala umthwalo we-radial kunye nomthwalo we-axial ngexesha elinye. Xa ithwala kuphela umthwalo we-radial, i-angle yoqhagamshelo ayi-zero. Xa ibhola emseleni nzulu ethweleyo kugqitywe ebubungqina obubonakalayo, ine-performance of a angular contact bearing and can bear a large axial load. Umlingani wokungqubana kwebhola ye-groove ethweleyo incinci kakhulu kwaye isantya somda siphezulu.
Iibheringi zebhola yomjelo onzulu zezona ziqhelekileyo iibheringi ezisetyenziswayo eziqengqelekayo. Ubume bayo bulula kwaye kulula ukuyisebenzisa. Isetyenziselwa ukuthwala umthwalo we-radial, kodwa xa ukonyuka kobungqina be-radial bunyukile, inentsebenzo ethile yebhola yoqhakamshelwano ye-angular kwaye inokuthwala umthwalo we-radial kunye ne-axial. Xa isantya siphezulu kwaye ukuhambisa ibhola kungakulungelanga, kunokusetyenziselwa ukuthwala umthwalo we-axial ococekileyo. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo iibheringi kunye iinkcukacha ezifanayo kunye nemilinganiselo iibheringi groove ibhola enzonzobila, olu hlobo lokuthwala kukho ukungavisisani coefficient encinane kunye nesantya esiphezulu. Nangona kunjalo, ayinakuchasana nefuthe kwaye ayifanelekanga kwimithwalo enzima.
Emva kokufakwa kwebhola emqengqeleki kufakwa kwishafti, ukufuduswa kwe-axial kweshafti okanye indlu kungathintelwa ngaphakathi kwisikhuselo se-axial sebheringi, ukuze ibekwe i-axially kumacala omabini. Ukongeza, olu hlobo lokuthwala lukwanenqanaba elithile lokulungelelanisa amandla. Xa ithambekele ku-2'-10 'ngokubhekisele kumngxunya wezindlu, isenokusebenza ngokwesiqhelo, kodwa iya kuba nefuthe elithile kubomi bokuthwala.
Iibheringi zebhola emseleni enokusetyenziswa kwiibhokisi zegiya, izixhobo, iinjini, izixhobo zombane zasekhaya, iinjini zomlilo zangaphakathi, izithuthi zothutho, oomatshini bezolimo, oomatshini bokwakha, oomatshini bokwakha, izikeyiti ezijikelezayo, i-yo-yos, njl.
I-groove yebhola enenzala yokufaka indlela yokufaka 1: cofa kufanelekile: isangqa sangaphakathi sebheringi kunye neshafti zihambelana ngokuqinileyo, kwaye umsesane wangaphandle kunye nomngxunya wokuhlala uthwele ngokukhululekileyo, ukuthwala kungacinezelwa-kufakelwe kwishafti ngomatshini wokushicilela. , kwaye emva koko ishafti kunye nokuthwala Zibeke emngxunyeni wokuhlala kunye, kwaye udibanise umkhono wendibano owenziwe ngezinto zentsimbi ezithambileyo (ubhedu okanye intsimbi ethambileyo) kubuso bokugqibela bendandatho yangaphakathi ephathekayo ngexesha lokucofa. Umsesane wangaphandle wokuthwala uhambelana ngokuqinileyo nomngxunya wesihlalo sokuthwala, kwaye iringi yangaphakathi kunye neshafti xa ukulingana kukhululekile, ukuthwala kungacinezelwa kumngxunya wokuhlala kuqala. Ngeli xesha, ububanzi bangaphandle bomkhono wendibano kufuneka bube buncinci kunobubanzi bomngxuma wokuhlala. Ukuba iringi ethweleyo ifakelwe ngokuqinileyo ishafti kunye nomngxunya wokuhlala, faka iringi yangaphakathi kwaye Iringi yangaphandle kufuneka icinezelwe kwishafti nakwisihlalo somngxunya ngaxeshanye, kwaye ubume bomkhono webandla kufuneka ubenakho ukucinezela ubuso bokugqibela bendandatho yangaphakathi kunye nomsesane wangaphandle ngaxeshanye.
I-groove yebhola enenzala enendlela yokufaka ezimbini: ukufudumeza kufanelekile: ngokufudumeza ukuthwala okanye ukuhlala kwesihlalo, kusetyenziswa ukwanda kwe-thermal ukuguqula ubungakanani obungqingqwa bube lula. Yindlela yokufaka esetyenziswa ngokuxhaphakileyo kunye nokugcina abasebenzi. Le ndlela ilungele ukuphazamiseka okukhulu Ukufaka i-bearing, beka i-bearing okanye i-ring ring ehlukanisiweyo kwitanki yeoyile kwaye uyifudumeze ngokulinganayo kwi-80-100 ℃, emva koko uyisuse kwioyile kwaye uyifake kwishafti ngokukhawuleza. , Ukuthintela ukuphela kwendandatho yobuso kunye negxalaba ukusuka ekupholiseni Ukuba ulingano aluqinanga, ukuthwala kunokuqiniswa emva kokupholisa. Xa umsesane wangaphandle wokuthwala uvalwe ngokuqinileyo sisihlalo esikhanyayo sesinyithi, indlela eshushu eshushu yokufudumeza isihlalo sokuthwala ingasetyenziselwa ukunqanda ukukrwela kumphezulu wokukhwelana. Xa kushushubezwa ukuthwala ngetanki yeoyile, kufanele kubekho iigridi kumgama othile ukusuka ezantsi kwebhokisi, okanye ukuthwala kufuneka kuxhonywe ngentambo. Ukuthwala akunakubekwa emazantsi ebhokisi ukuthintela ukungcola okungcolileyo ekungeneni kokuthwala okanye ukufudumeza okungalinganiyo. Kufuneka kubekho ithemometha kwitanki yeoyile. Kulawulwe ngokungqongqo iqondo lobushushu beoyile ukuba lingagqithi kwi-100 ° C ukuthintela ukwenzeka kweziphumo zobushushu kunye nokunciphisa ubunzima bentsimbi.
Egqithileyo Iibheringi ibhola angular
Okulandelayo: Ukujikeleza kwe-roller ukujikeleza
Ukuzilungelelanisa ngokwakho ibhola
Ukuthwala ibhola ebiyelweyo
Ukujikeleza kwe-roller ukujikeleza